सी–१ भिसामा अमेरिकामा ग्रीनकार्ड प्राप्त सकिन्छ होला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
सी–१ भिसामा अमेरिकामा ग्रीनकार्ड प्राप्त सकिन्छ होला ?
म सी–१ भिसामा अमेरिका आएको हुँ । शिपमा काम गर्ने हैसियतले मैले अमेरिकामा पस्ने मौका पाएँ । मेरो सी–१ भिसा एक महिनासम्म भ्यालिड छ । जहाजमा धेरै वर्ष काम गरे पनि खासै स्थायित्व पाउन नसकेकाले गर्दा यतै अमेरिकामा मिलेसम्म बस्ने विचार गरेको छु । म अविवाहित भएकोले नेपाल फर्किहाल्नु पर्ने कारण छैन । साथीहरुले अब यहाँ आइसकेपछि किन फर्कने भनी सल्लाह दिन्छन् । यहाँ कानूनीरुपमा बस्ने उपाय छ कि ? वा के गरेर ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ होला ? उत्तरका लागि धेरै आभारी छु ।
केपी गुरुङ, न्यूयोर्क
सी–१ भिसाको आधारमा अमेरिकामा ट्रान्जिटमा टेम्पोररी वा केही सीमित समयका लागि मात्र अर्को देश वा डेस्टिनेसनमा जानको लागि वा आफूले काम गरेको जहाजमा फर्कनका लागि टेम्पोररिली ट्रान्जिटका रुपमा बस्ने पाइने हुन्छ । यो भिसा इन्टरनेशनल कमर्श, शिपिङ वा फोरन गभर्मेन्टमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई अवस्थाअनुरुप अर्को मुलुक जाँदा बाटोमा अमेरिका भई जानुपरेको खण्डमा अति नै छोटो समयका लागि अमेरिकामा ट्रान्जिट गर्न पाउने सहुलियतस्वरुप दिइने भिसा हो । यो भिसा लिई प्रवेश गरेपछि तोकिएको समयभित्रमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । यदि भिसाको भ्यालिडिटीभित्र अमेरिका छोडिएन भने इलिगल हुने अवस्था हुन्छ ।
यो सी–१ भिसाबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुको फ्युचर इमिग्रेसन सोलुसन प्रायः शून्य नै हुन्छ । सी–१ भिसामा धेरै रेस्ट्रिक्सनहरु बाँधिएको हुन्छ । सी–१ भिसाबाट अन्य भिसाहरु जस्तै एफ–१, एच–१बी, बी–१/बी–२ मा चेन्ज अफ स्टाटस हुँदैन । त्यस्तैगरी सी–१ भिसामा प्रवेश गर्नेहरुले ‘सेक्सन २४५ (आई) भएकाबाहेक’ एड्जष्टमेन्ट अफ स्टाटस गर्न अर्थात् कुनै तरिकाबाट ग्रीनकार्ड लिन इलिजिबल हुने छैनन् । तपाईं विवाहको नै चाजोपाजो मिले तापनि सी–१ भिसाको कारण विवाहबाट ग्रीनकार्ड पाउन असम्भव हुनेछ ।
त्यसैले अध्यागमनले दिएको म्यादभित्रमा अमेरिका छोडी आफ्नो गन्तव्यमा जानुभएन भने तपाईंको स्टे इलिगल हुनेछ । त्यसैले अमेरिकामा इलिगल भई फ्युचर इमिग्रेसनबाट आउन सक्ने फाइदाहरुलाई दफन गर्नुभन्दा समय हुँदै अमेरिका छोडी आफ्नो इमिग्रेसन रिकर्ड सफा राख्न सुझाव छ । मिलेको खण्डमा भविष्यमा बी–१/बी–२ भिसा लिएर पुनः अमेरिका प्रवेश गर्नुभयो भने विभिन्न लिगल र सरल उपायहरुद्वारा लामो समयसम्म अमेरिका बसाइँको व्यवस्था मिलाउन सकिने हुन्छ ।